NTAK Ị GAGHỊ EZIGA EMAIL - OZI - 2019
Ntak ị gaghị eziga email
Enweghị ọrụ ọ bụla na Ịntanetị mara na ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ siri ike maka ndị ọrụ niile, na-enweghị otu, maka oge na-enweghị ngwụcha. N'ihi njehie ndị mmadụ na-eziga n'usoro iziga akwụkwọ ozi site na nzipu ozi, isiokwu nke ịhazi ụdị nsogbu a na-adị ngwa ngwa.
Emela ozi ịntanetị
Nke mbụ, ọ dị mkpa ịdọrọ uche gị gaa n'eziokwu ahụ bụ na ọrụ ozi mail dị egwu enweghi nsogbu na akụkụ nkesa. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na i nweghị ike izipu email ọ bụla site na email, ihe kpatara ya nwere ike ịdọrọ na omume gị na ngwa gị, ọ dịghịkwa ihe jikọrọ ya na omume nke ndị ọkachamara na teknụzụ nke akụ.
Tupu ị nyochaa nsogbu nke ọrụ ọ bụla kachasị ewu ewu, ị ga-ebu ụzọ rụọ ọtụtụ omume.
Kọwaa ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme na cache na ihe nchọgharị gị.
Esi kpochapụ akụkọ ihe mere eme na Yandex Browser, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
Esi ehichapụ cache na Yandex Browser, Google Chrome, Opera, Mazile Firefox
Mee ọtụtụ nyocha ọsọ ọsọ Ịntanetị, wepụ nsogbu nsogbu netwọk.
Mmemme maka ịlele ọsọ nke Intanet
Ịntanetị nke njikọ Ịntanetị ọsọ ọsọ
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, rụọ ọrụ njikarịcha njikọ netwọk, ghara ichefu ịmalitegharịa nke Ịntanetị.
Gụkwuo: Otu esi eme ka ọsọ ọsọ nke Intanet dị na Windows 7 na Windows 10
Ịnwere ike ịnwa nwa oge iji dochie ihe nchọgharị gị na ihe omume ọ bụla ọzọ.
Hụkwa: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex Browser
Ọ bụrụ, n'ihi mmejuputa iwu niile a dị n'elu, ị nweghị ike idozi nsogbu site na izipu akwụkwọ ozi, ị nwere ike ịga n'ihu nyochaa njehie na ozi onye ọ bụla.
Imetụ Yandex ozi ozi, ọ dị mkpa iburu n'uche na ihe a na-enye gị ohere iji usoro jikọọ aha nke aka gị ma ziga ozi ọ bụla n'aha ozi achọrọ. Site na njirimara a, nsogbu ọ bụla na izipu ozi na ngalaba nke atọ nwere ike ịbịa site na mbibi nke adreesị aha.
Ihe ọzọ: Gini mere ị ga-ezipụ akwụkwọ ozi na Yandex
Na mgbakwunye na nke a, njehie na izipu ozi nwere ike ịbịaru na njedebe nke ngalaba ahụ, nkwụsị ya ma ọ bụ ezighi ezi ntọala. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-enweta nsogbu ndị dị otú a mgbe ị na-eji ngalaba nke aka gị, lelee ya maka operability.
Nsogbu na ngalaba aha na-abaghị uru na-emetụtakwa ndị nwe ụlọ akwụkwọ ozi mgbe niile. Otú ọ dị, ohere nke ọnọdụ dapụtara site na igbochi onye ọrụ na Yandex usoro dị oke ala.
N'ihe gbasara nsogbu nkịtị, izipu njehie nwere ike si n'aka nchọgharị ma ọ bụ igbochi ya. Enwere ike idozi ha site nhichapụ ihe nchọgharị na mkpochapu eziokwu nke oghere ahụ n'akụkụ onye nnọchiteanya ahụ.
Ị nwere ike ịrịọ maka enyemaka na nsogbu dị otú a site na Yandex.Mail ọkachamara ọkachamara.
Gụkwuo: Otu esi dee Yandex
Ọrụ Exchange Email Meil.ru nwere nsogbu na-eziga ozi na onye na-ezigara na ọnụ ọgụgụ dị ole na ole. N'otu oge ahụ, enwere nsogbu ọ bụla nwere ike idozi ya site na otu usoro kachasị mma - iji usoro mmemme pụrụ iche.
Anyị na-adọrọ uche gị gaa n'eziokwu ahụ bụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị zigara onye ọrụ ọzọ ozi na-enweghị ihe ịga nke ọma, ọ ga-adị mkpa ka ị bịaghachi.
Ọtụtụ mgbe, ọrụ ndị dị ka Gmail na ọnọdụ akpaka, n'ihi nnukwu esemokwu dị na ọrụ ahụ, tinye leta si na ngalaba aha Mail.ru na folda ahụ Spam na onye natara ya.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-ezutekwa nsogbu na-adabere na arụmọrụ na-ezighị ezi nke ihe nchọgharị Ịntanetị. Otu esi kpochapu nke a, anyi gwara anyi na mmalite nke isiokwu a.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike idozi nsogbu ndị na-ebili, mepee nkwado maka nkwado ndị ọrụ na ozi Mail.ru.
Hụkwa: Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na mail Mail.ru adịghị emeghe
A maara ọrụ ozi mail nke Google ka ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eji mail iji hazie ozi ma ọ bụ ọrụ. N'ihi nke a, Gmail na-ekwenye na ọ fọrọ nke nta ka enweghi nsogbu ọ bụla site n'iziga akwụkwọ ozi, ihe omume ị nwere ike ịchọpụta ozugbo enwere ike.
Ọ bụrụ na ị nọ n'etiti ndị ọrụ nke ọrụ Gmail ndị ozi ha kwụsịrị ịbịakwute onye ezigara ma ọ bụ zitere ya ma ọlị, ị ga-agbaso ndụmọdụ maka ihichapu ihe nchọgharị ahụ.
Ikwesịrị iwepụ kpamkpam ohere nke nsogbu nkịtị, dị ka iji data adịghị adị.
Ndị ọrụ na-adịghị enweta ozi-e gị nwere ike ịnwe ụfọdụ mgbochi na igbe mbata email ha. Ọtụtụ mgbe, ọ na-agbadata nzacha akwụkwọ nke akwụkwọ ozi ma ọ bụ n'ihi mmezu kachasị nke ozi echekwara na akaụntụ ahụ.
N'ihe banyere mgbalị ị na-eme iji zere imehie, ị kwesịrị ịme ụzọ kachasị mma - kpọtụrụ ndị ọkachamara na teknụzụ nke ozi Gmail, na-enye nhazi ihuenyo kwesịrị ekwesị.
Ọrụ nke iziga akwụkwọ ozi na Rambler gbasara nsogbu ndị ọrụ nwere abụghị ihe dị iche na akụ ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. Karịsịa, nke a na-eche banyere mkpa maka nlele mbụ nke ihe nchọgharị ahụ iji kwụsie ike n'ọrụ.
Ihe dị iche iche nke usoro Rambler bụ ọnụnọ nke ntọala igbe na mpaghara pụrụ iche. Naanị mgbe ịtọ ntọala ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ị nwere ike izere ọtụtụ nsogbu ndị a na ọrụ a.
Ọ bụrụ na ị, n'agbanyeghị manipulations n'elu igbe ahụ, ka nwere njehie, a na-atụ aro ka ị rịọ maka nkwado akaaka nke usoro Rambler.
Hụkwa: Gịnị kpatara ọrụ Rambler anaghị arụ ọrụ?
Na njedebe nke ibuotikọ a, anyị nwere ike ikwu naanị na ọtụtụ nsogbu ndị dị na izipu ozi site na ọrụ dịgasị iche bụ nke yiri ya. Ọzọkwa, ụzọ nke mkpebi nbibi na otu n'ime usoro ndị ahụ nwere ike ịga na saịtị ndị ọzọ.